Ụlọ Sauna Jiri Ịkụcha China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ụlọ Sauna Jiri Ịkụcha - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ụlọ Sauna Jiri Ịkụcha)
Ụlọ Steam Sauna Room Jiri ihe ndị na-ekpo ọkụ
Nkọwapụta ngwaahịa Nkà na ụzụ ọhụrụ nke ihe ọkụkụ. Ụzọ ka mma maka saa ọkụ. Mkpụrụ akwụkwọ carbon crystal, nke nwere ezigbo ụzarị ọkụ nke na-egbuke egbuke, nke nwere ike ịbanye n'ime ahụ gị ma mee ka ọbara gbasaa . Ezigbo maka ọtụtụ ụdị ojiji. N'ihe dị ọhụrụ na teknụzụ dị na Puku (PTC), ọ bụ nduzi onwe onye,...
Ụlọ Sauna Jiri Ịkụcha PTC Sauna Room Ịkụcha Ụlọ Ịkụcha Ụlọ Ụlọ Ọrụ Sauna Ụlọ Ọkụ Ụgbọaka aka ọkụ Ụlọ ihe dị ọkụ Ụgbọ ala na-ekpo ọkụ 12v Ụlọ ihe nkiri ụgbọala